Shirka wada tashiga qaran oo maanta ka furmaya Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka wada tashiga qaran oo maanta ka furmaya Muqdisho
Qaban qaabada shirka arrimaha doorashada ayaa si weyn kaga socota teendhada Afisyooni, oo dhex taalla xeendaabka garoonka diyaaradaha Aadan Cade, ee Magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa maanta loo ballansan yahay furitaanka shir madaxeedka Dowladda Federaalka Soomaaliya, hoggaamiyaasha Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka,iyo Gobolka Banaadir, kaas oo lagu qaban doono aagga la ilaaliyo ee Gegida Diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Inkasta oo shirka ay soo qabanqaabiyeen wakiilada Beesha Caalamka ee Soomaaliya oo ay hor boodayaan wakiilka xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo Safiirka Mareykanka Donald Yamamoto, haddana ugu danbeyn Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Faramaajo ayaa iclaamiyay in maanta oo Isniin ah la isugu yimaado teenddhada Afisyooni.
Qaar ka mid ah madaxda ka qeyb galeysa shirka ayaa bilaabay in ay goobta sii gaaraan, kolonyo galbineysa Madaxweynaha aan sharciyadda heysan Farmaajo ayaana dhawaan gaaray Xarunta aan Xamar laga xakumin ee Xalane.
Madaxweynayaasha Maamullada taabacsan nidaamja Farmaajo iyo guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa iyagana la filayaa in ay dhawaan gaaran Xarunta Xalane, halka shaki weyn la galinayo ka qeyb galka shirka ee Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Jubbaland iyo Puntland.
Axmed Madoobe iyo Siciid Deni ayaa ka biya diidsan Ajandaha shirka, waxaana socda dalaallo ay wadaan wakiilada beesha caalamka oo la doonayo in masuuliyiintaan lagu qanciyo ka qeyb galka shirka.
Waxaa la warinayaa in laga yaabo in shirku wajaho dib u dhac farsamo oo dhowr saacadood ah, maadaama madaxda qaar muujiyeen tabashooyin u baahan in la xalliyo ka hor furitaadna wada hadalka.
Ujeedka shirkaan waa in la xalliyo qodaadii ka soo laabtay heshiiskii 17-kii September 2020 lagu gaaqay Muqdisho, madmadowga hareeyay, guud ahaan hirgalinta doorashoyinka iyo kala shakiga jira ee la xariira amniga ee cirka isku shareeray kadib 19-kii Febaraayo 2021.